Oxygen ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင့်မြတ်နဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ …. – Askstyle
Oxygen ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင့်မြတ်နဲ့ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ….
ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကတော့ MRTV – (4)ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီလေး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ” ဝိဉာဉ်ရှိုက်သံ” ဇာတ်လမ်းတွဲကစတင်ကာ ” ကြယ်စင်ချို” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေစတင်သတိထားမိလာပြီး “ဝင်္ကပါစံအိမ် ” ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” စောကလျာ ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင် အပြင် “အမုန်းမှသည်” ဇာတ်ကားမှာ” နေချိုသွေး”အဖြစ်ပရိသတ်တွေလက်ခံ သဘောကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီး “အချစ်သင်္ကေတ “ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” ဖြူစင်ရှင်းသန့် ” ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာအပြင် “ချစ်ခြင်းတရားတို့ရှိရာ ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သက်သက်ဇော် အဖြစ် ကာရိုက်တာမိစွာ သရုပ်ဆောင် ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ” သက်သက်ဇော်” အဖြစ် ဇာတ်လမ်းတွဲ နာမည်ကိုသာ အစွဲပြု ခေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးဝန်းရံကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောအနုပညာရှင်တွေနဲ့ မတူတဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ပိုသတိထားမိစေတာဖြစ်ပြီး ဖြူစင်တဲ့ ကလေးသဖွယ်အပြုံးလေးတွေကြောင့် နှစ်ခြိုက်သူတွေပိုများလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တွေကို အမြဲမျှော်လင့်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ဆောင်းဝတ်ရည်မေက သရုပ်ဆောင်ကြာစိ(နတ်ကတော် ရွှေကြာ)၏ ညီမချောလေး ” ငွေကြာ “အဖြစ် ပါဝင်ထားတဲ့ ” နတ်အလိုဂြိုလ်အမ” ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို MRTV-(4) ရုပ်သံChannel မှာ ပြသခဲ့တာ ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အတွဲညီ လှတဲ့ မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးအောင်ရင်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ရဲ့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ ” Oxygen” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီနေ့ ကိုမြင့်မြတ်၊ ကိုနေရဲ… Daddy အောင်ခိုင် တို့နဲ့ အတူတူ Oxygen ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးစရိုက်ဖြစ်တယ်။အားပေးကြဦးနော် ရုံတင်ရင်” ဆိုပြီး ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆောင်းဝတ်ရည်မေကို ချစ်ရင် မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
crd : celegabar